§ Imigomo ejwayelekile ye-1
I-ejensi i-Express Weddiv SL ihlela usuku lomshado eDenmark imibhangqwana ethathe isinqumo sokushada. Le sevisi ekhokhelwayo ifaka okulandelayo:
- Ukuhlela usuku lomshado eDenmark
- Ukubuyekezwa nokudluliswa kwemibhalo edingekayo
- Ukunikeza imininingwane ngezidingo zokushada eDenmark
Ukucubungula amadokhumenti e-oda kungenziwa kuphela emva kokuba imali yesevisi ikhulunywe ngokugcwele kwi-akhawunti ye-Agency kanye ne-Agency ibe nayo yonke imibhalo edingekayo ngokugcwele. Ngokuthumela imibhalo, iklayenti iyavumelana nemigomo nemibandela. I-Agency Express Wedding ApS ayisebenzi njengenhlangano yokuphola noma njengenhlangano yokuhamba noma yokuhlala.
§ Izinkokhelo ze-2
Inkontileka azonikezwa ngokuthumela ngokuphelele futhi lisayindwe ifomu oda nge-imeyili, ngefeksi noma ngeposi. I-oda kuphela emva kokuthola ifomu oda ngokuphelele futhi lisayindwe futhi kokuthola amaphepha adingekayo ukuze emcimbini wedding eDenmark ngefeksi, i-imeyili noma ngeposi bearbeitet.Die ekukhokhweni imali yesevisi eyenziwe EFT ku-akhawunti ye-Ejensi futhi ngeke uthathwa sigcwaliswe uma inani lidalwe
§ 3 yokwamukela nokuthumela amadokhumende
Iklayenti izokwaziswa yi-ejensi ngokushesha nje lapho wonke amadokhumenti adingekayo kanye nokukhokha sekufikile. Ukulethwa kwesikhashana kuzo zonke izincwadi kanye nokuqedela ukuqedela komemezelo womshado kanye nefomu le-oda kuyadingeka ukucubungula umyalelo.
§ Imali ye-4 yemibhalo ehanjisiwe
I-ejensi ayitholi mthwalo wezincwadi ezilahlekile ngokuthunyelwe. Ngakho-ke, wonke amadokhumenti kufanele athunyelwe kuphela njengekhophi. Iklayenti inesibopho sokunemba kwamadokhumenti athunyelwe futhi kumele athumele amadokhumenti okuqala ehhovisi lokubhalisa.
§ Ukushiya i-5 / ushintsho lwe-oda
Ukubuyekeza kabusha komhla womshado kakade kusethwe iziphathimandla zaseDenmark kuya kwenye idethi kungenzeka kuphela kumasipala wosuku oluqokwe kakade. Ukusetha ukuqokwa okusha komunye umphakathi, isabelo esisha kufanele sikhishwe. Ukukhansela i-oda elinikeziwe, isimemezelo esibhaliwe esivela kumakhasimende ukuveza i-Express Weddiv SL kuyadingeka. Imali ye-250 Euro izokhokhiswa ekubuyiselweni kabusha kokuqokwa okuvunyelwene ngokuqokwa. Uma kwenzeka ukukhansela usuku lomshado yikhasimende, akukho mali ezobuyiselwa imali. Ngemuva kokuthola imali yenkonzo, akukho ilungelo lokususwa.
§ 6 Izindleko ezengeziwe
Ukuze consummate umshado, izindleko ezengeziwe, ezifana nokuthola saya ehhovisi lokubhalisa, izindleko ezitholiwe iklayenti ehhovisi lokubhalisa (uma abazange vorrausbezahlt), futhi mhlawumbe abatoliki, indawo yokuhlala kanye ukudla.
Express Weddiv SL akusiyo akhokhe imishado ezingazange zenziwe ngokwenza izitatimende ezingamanga, sekwedlule amaphepha ethunyelwe yokubhalisa sekudlule isikhathi ehhovisi lokubhalisa, ukufika sekwephuzile usuku lomshado, ziyashoda noma oqanjiwe amadokhumenti wamambala namtjhana izizathu abalele umuntu iklayenti ,
§ I-8 Force Majeure
I-ejenti ayitholi mthwalo wemfanelo uma kwenzeka amandla amakhulu (isib. Uma kwenzeka ukwehla kwezitimela, amafriji, izindiza noma ukugula, ukufa, impi, ubuphekula, ukushaya noma ukukhubazeka kwemeteor). Uma umshado ungengenxa yokuphoqelela imishini enkulu, ngeke kube khona ukubuyiselwa kwemali yesevisi.
§ Usuku lomshado lwe-9
Usuku olufunayo lomshado oluchazwe kwifomu lokuhlelwa ngumthengi alubophezeli. Usuku lomkhosi womshado unqunywa amandla okukhululeka kwamahhovisi okubhalisa aseDenmark. Usuku lungase luhluke kusukela ngosuku oluceliwe ikhasimende ngezinsuku ezimbalwa.
§ Inqubomgomo Yobumfihlo ye-10
Ngokusho §28 BDSG (Federal Data Protection Act), sifisa aveze ukuthi kunesidingo esimeningcondvo idatha ibhizinisi icutshungulwe uhlelo kukhompyutha ngokuhambisana § 33 BDSG futhi agcinwe. Yonke idatha yomuntu siqu eqoqwe ikhasimende izophathwa ngokuyimfihlo. Ngokuyisisekelo, asihlanganyeli idatha yakho yomuntu siqu nabangaphandle. Okungafani kusebenza kuphela lapho usukwaziswa ngokucacile futhi usinike imvume yakho.
§ Umbuso we-11
Ubukhosi bazo zonke izingxabano, kuya ekuhlanganiseni, indawo yokulawula i-Express Weddiv SL. Isihlalo se-Express Weddiv SL si-Betera / ES. Amaqembu asebenza ngokuvumelana nawo avumelana nokusetshenziswa komthetho weBetera / ES ngokuphathelene nawo wonke ubuhlobo obusemthethweni obuvela kulobudlelwane obunesivumelwano.
§ impendulo ye-12
Ifekisi: + 49 (0) 3212-5859584
Ikhodi yentela: ESB98805286
I-Register Register: uNgqongqoshe we-Economia yHacienda
§ 13 Google ™ Analytics
Le webhusayithi isebenzisa iGoogle ™ Analytics, isevisi yokuhlaziya iwebhu evela kwaGoogle Inc. (“Google”). I-Google Analytics isebenzisa okuthiwa “amakhukhi”, amafayela wombhalo agcinwe kwikhompyutha yakho futhi avumela ukusetshenziswa kwakho kwewebhusayithi ukuthi kuhlaziywe. Imininingwane eyenziwe ikhukhi mayelana nokusebenzisa kwakho le webhusayithi (kufaka phakathi ikheli lakho le-IP) idluliselwa kuseva yakwaGoogle e-USA futhi igcinwe lapho. I-Google izosebenzisa lolu lwazi ukuhlola ukusetshenziswa kwakho kwewebhusayithi, ukuhlanganisa imibiko yomsebenzi wewebhusayithi yomhlinzeki wewebhusayithi nokunikeza ezinye izinsizakalo eziphathelene nomsebenzi wewebhusayithi nokusetshenziswa kwe-inthanethi. I-Google nayo ingadlulisela lolu lwazi kubantu besithathu uma lokhu kudingwa ngumthetho noma uma abantu besithathu becubungula le datha egameni le-Google. I-Google ngeke nhlobo ihlobanise ikheli lakho le-IP nenye idatha ye-Google. Ungavimbela ukufakwa kwamakhukhi ngokusetha isoftware yakho ngokufanele; kodwa-ke, sithanda ukuveza ukuthi kulokhu ngeke ukwazi ukusebenzisa yonke imisebenzi yale webhusayithi ngokugcwele. Ngokusebenzisa le webhusayithi, uyavuma ukuthi uyavuma ukucutshungulwa kwedatha eqoqwe ngawe yi-Google ngendlela echazwe ngenhla futhi ngenhloso eshiwo ngenhla. Isengezo sokuyekiswa kokusebenza kweziphequluli ze-Google Analytics sinikeza izivakashi zewebhusayithi ukulawula okungaphezulu kokuthi iyiphi idatha eqoqwa yi-Google Analytics kumawebhusayithi abavakashelayo. Uma ungafuni idatha yakho igcinwe, sicela ufake ithuluzi lokuyekisa elihlinzekwe yi-Google ku http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Ukuze uthole olunye ulwazi, bheka http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de noma ngaphansi http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (imininingwane ejwayelekile kuGoogle Analytics nokuvikelwa kwedatha). Siveza ukuthi kule webhusayithi iGoogle Analytics yandisiwe yafaka ikhodi ethi "gat._anonymizeIp ();" inwetshiwe ukuqinisekisa iqoqo elingaziwa lamakheli e-IP (okuthiwa i-IP masking).